Vaovao - Inona avy ireo fitaovana Biodegradable
Inona avy ireo fitaovana Biodegradable
Famaritana ny bioplastika: raha miorina amin'ny biolojika ny plastika dia faritana ho bioplastika, biodegradable, na izy roa ireo. Ny fototra biolojika dia manondro fa ny vokatra (ampahany) dia avy amin'ny biomassa (zavamaniry). Ny bioplastika dia avy amin'ny katsaka, fary na cellulose. Ny biodegradation ny bioplastics dia miankina amin'ny firafiny simika. Ohatra, ny biolojika 100%, ny bioplastika dia tsy voatery ho voajanahary.
Ny plastika biodegradable dia plastika izay mety ho simba amin'ny asan'ny zavamananaina velona, ​​matetika ny mikraoba, ho anaty rano, gazy karbonika ary biomassa.
Na dia mitovy aza ny teny hoe "bioplastic" sy "plastika biodegradable", dia tsy mitovy dika. Tsy ny bioplastika rehetra no voajanahary.
Ny biodegradation dia fizotry ny simika izay anaovan'ny zavamiaina bitika eo amin'ny tontolo iainana akora voajanahary toy ny rano, gazy karbonika ary zezika (tsy misy additives artifisialy). Ny fizotry ny biodegradation dia miankina amin'ny toe-piainana manodidina (ohatra ny toerana na ny mari-pana), ny fitaovana ary ny fampiharana.
Fanasokajiana ny bioplastika
Fampivoarana bioplastika ankehitriny
Ny polymera angovo azo havaozina dia azo zaraina ho polymers de starch, asidra polylactic (PLA) polymul cellulose PHB polyhydroxyalkanoates (PHA).
Ny vokatra iraisam-pirenena momba ny bioplastika dia 2.11 tapitrisa taonina amin'ny taona 2019 ary 2,43 tapitrisa taonina amin'ny 2024, izay antenaina hitombo kely. Raha ampitahaina amin'ny vokatra manerantany mihoatra ny 359 tapitrisa isan-taona / taonina ny plastika, dia mbola mitaky ampahany kely ihany. Fonosana plastika mitovy (henjana sy malefaka) no nibahan-toerana tamin'ny famokarana bioplastika manerantany, miaraka amin'ny antsasaky ny (53%) amin'ny tsena bioplastika iray manontolo tamin'ny taona lasa.
Ny hevitra ao ambadiky ny polymers miorina amin'ny biolojika dia ny manolo ny karbaona fôsily amin'ny loharano azo havaozina sy sariaka amin'ny tontolo iainana (siramamy amin'ny zavamaniry), izany hoe mamokatra polymera avy amin'ny loharanon-karena voajanahary azo havaozina, ary mamaky haingana ny fonosana ary miverina amin'ny natiora.
Fitaovana biodegradable izahay (Wuhu Radar Plastic Company Limited) vokatra famokarana miaraka
Raisinay ny PLA sy ny PBAT ho fitaovana lehibe ho an'ny vokatra biodegradable
1, fonosana PLA mifikitra, sarimihetsika PLA Stretch, sarimihetsika fonosana PLA;
2, kitapo PLA (kitapo alika voajanahary azo zahana, kitapo fako azo zahana simba), izay PLA + PBAT;
3, mololo PLA, tsiranoka fisotro PLA tsy azo ovaina.
Ny vokatray rehetra dia voajanahary 100%, izay nankatoavina EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA.
Kitapo fako azo zezika, Famonosana clod biodegradable, Sarimihetsika mihinjitra biodegradable, Kitapo azo zezika, Eco Cling Wrap Sugar Wrap, Kitapo fako tsy azo ovaina,